Tartamayaasha X/weyne oo wareegga labaad u gudbay caawa | Somali National Television - sntv.so
Home WARARKA MAANTA Tartamayaasha X/weyne oo wareegga labaad u gudbay caawa
Tartamayaasha X/weyne oo wareegga labaad u gudbay caawa
Habeenkii Lixaad ee tartan Cilmiyeedka Warbaahinta degmooyinka gobollada dalka oo uu taabagelinayo maamulka gobolka Benaadir, waxaa ku tartamay degmooyinka X/weyne iyo Kaxda oo ka wada tirsan gobolka Benaadir.
Labada degmo, waxaa ka weydiiyey su’aalihii tartanka ee toddoba su’aal degma walba, afar su’aallood kaddib wadarta guud ka dhigeysa sideed su’aal ayaa la galay qeybta nasashada, iyadoo lagu soo gudbiyey warbixinnadii ka hadlayey Taariikhda labada degmo ee Kaxda iyo X/weyne ee gobolka Benaadir.
Guddigiga tartanka ayaa dhammaadka su’aallaha kaddib shaaciyey natiijada tartanka, degmada Kaxda waxaa la weydiiyey toddobo su’aal, waxa ay si sax ah uga jawaabeen afar su’aal saddex waa ay iska qaldeen, wax kka faa’ideysi ahna ma helin, sidaas ayeey ku heleen siddeed dhibcood.
Sidoo kale degmada X/weyne waxaa la weydiiyey toddoba su’aal, si sax ah waxa ay uga jawaabeen saddex su’aal hal su’aal ka faa’ideysi ayeey ku heleen saddexna waa ay iska qadldeen, iyaguna waxa ay uruursadeen siddeed dhibcood, sidaa darteed guddiga ayaa shaaciyey in loo baahan yahay su’aallo dheeri ah, maadaama ay isku dhibco noqdeen, waxaau lagu daray min saddex su’aal.
Natiijada su’aallaha dheeriga ah
Su’aallaha dheeriga ah ee lagu daray kaddib degmada Kaxda waxaa la weydiiyey saddex su’aal, waxa ay ka jawaabeen laba su’aal hal su’aalna waa ay iska qaldeen, sidaas ayeey ku uruursadeen wadarta guud 12 dhibcood.
Degmada X/weyne iyaguna waa la weydiiyey saddex su’aal oo dheeri ah, waxa ay ka jawaabeen laba su’aal oo la weydiiyey mid saddexaad oo ka faa’dieysi ahna waa ay saxeen, sidaas darteed waxa ay uruursadeen 14 Dhibcood oo ay ugu gudbeen wareegga labaad ee tartan Cilmiyeedka Warbaahinta Qaranka.
Habeen dambe, waxaa tartami doona degmooyin Kaaraan oo gobolka Benaadir ka tirsan iyo degmada Boosaaso oo ka tirsan gobolka Bari Puntland.
Previous articleWasaaradda Gaadiidka Badda oo soo saartay digniin
Next articleTahriibayaal laga soo badbaadiyay xeebaha dalka Talyaaniga